काठमाडौं । भिसा अवधि सकिएपछि अबैध रूपमा बसेकालाई ११ नेपालीलाई चिनियाँ प्रहरीले नेपाल फर्काएको छ । दुई महिना हिरासतमा राखेपछि उनीहरूलाई मङ्गलवार फर्काइएको हो । रेस्टुरेन्टमा काम गर्न भनेर छ महिनाअघि चीन आएका १४ युवा भिसा अवधि सकिएपछि पनि अवैध रूपमा बसिरहेको भन्दै चिनियाँ प्रशासनले हिरासतमा लिएको थियो । एक जना भिसा अवधीसकेपछि फर्किए,...
सल्लाहकार सम्पादकमा निरौला नियुक्त
लण्डन । दर्पण संसार डटकमको सल्लाहकार सम्पादकमा बिपिन निरौला नियुक्त भएका छन् । नेपाल प्रेस इन्स्च्यिूट पत्रकारिताको तालिम लिएका निरौलाले बेलायतकै लण्डन मेट्रोपोलिटन युनिभर्सिटीबाट पत्रकारिता बिषयमा थप अध्ययन गरेका छन् । नेपाल पत्रकार मह संघ बेलायतका संस्थापक सदस्य निरौला नेपाल प्रेस यूनियन बेलायतका संस्थापक संयोजक समेत हुन्...
अष्ट्रेलियामा २३ वर्षिय नेपाली युवतीको रहस्यमयी मृत्यु, प्रहरी अनुसन्धान जारी
अष्ट्रेलियामा एक २३ वर्षिय नेपाली युवतीको मृत्यु भएको छ । न्यु साउथ वेल्सका प्रहरीहरुले नेपाली युवतीको मृत्यु कसरी भयो भन्नेबारे केही खुलाएको छैन । गएको शनिबार ती युवती ब्यांक्सटाउन सडकमा अचेत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको थियो । प्रहरीका अनुसार डिसेम्बार २२ मा चापेल रोडबाट उनलाई अचेत अवस्थामा अस्पताल लगिएको थियो । बेलुका ८...
भोइस अफ नेपाल अब यूकेमा
अब आवाजनै बन्नेछ पहिचान । कडेन्जा यूकेको व्यवस्थापनमा एएनसि इभेण्ट म्यानेजमेण्ट प्रा.लि. को चर्चित कार्यक्रम ' भोइस अफ नेपाल' को प्रस्तुति अब यूकेको शहरमा हुने भएको छ । नेपालमा सफल रुपमा आफ्ना प्रस्तुति दिदै आएको ' भोइस अफ नेपाल ' यूकेको विभिन्न शहरमा भिन्न मिति र स्थानमा आयोजना हुने आयोजक कडेन्जा यूकेले जानकारी गराएको हो । प्रस्तुति...
एनआरएनएको तेस्रो अफ्रिका क्षेत्रीय बैठकको तयारी पूरा
गैरआवासीय नेपाली संघको तेस्रो अफ्रिका क्षेत्रीय बैठकको सबै तयारी युगान्डाको राजधानी सहर कम्पालामा पूरा भएको छ । आयोजक राष्ट्र एनआरएनए एनसिसि युगान्डाका अध्यक्ष राजमणि भण्डारीका अनुसार यही २९ - ३० डिसेम्बर २०१८ मा सम्पन्न हुने कार्यक्रमको प्रारम्भिक तयारी पूरा भएको छ । बैठक कम्पाला सहरको आकासिया मलमा रहेको सभाकक्षमा सम्पन्न...
लिभरपुलमा एनआरएनए युकेको बृहत अन्तरक्रिया कार्येक्रम सम्पन्न
लिभरपुल । बेलायतको लिभरपुलमा एनआरएन युकेले इंग्ल्याण्ड नर्थवेस्ट लिभरपुल, ब्ल्याकपुल, मेन्चेस्टर, बोल्टन सहरका नेपालीहरु बीच बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले लिभरपुलको द गोर्खा रेष्टुरेन्टको सभा हलमा एनआरएन यूकेका अध्यक्ष योगकुमार फगामीको प्रमुख आथित्यमा साथै स्थानिय समाजका ...
पोर्चुगलमा क्यान्सर पीडित नेपाली महिलाको निधन
काठमाडौं । क्यान्सर रोगबाट पीडित एक नेपाली महिलाको पोर्चुगलमा निधन भएको छ । विगत लामो समयदेखि सपरिवार पोर्चुगल बस्दै आएकी पोखरा महानगरपालिका– १७ छोरेपाटनकी ३९ वर्षीया मिरा नेपालीको निधन भएको हो । नेपालीको उपचारका क्रममा बुधबार राती अस्पतालमा निधन भएको नारी समाज पोर्चुगलकी अध्यक्ष सिता बरालले जानकारी दिइन् । मृतक नेपाली...
बेलायती जनगणनामा नेपालीलाई समावेश गर्न अनुरोध
प्रयास पहिलो भने होइन तर सम्वन्धित निकायमै औपचारिक निवेदन पुगेको यो पहिलो पटक हो । एनआरएन बेलायतको पहलमा बेलायती सांसद , काउन्सीलर तथा बेलायत स्थित नेपाली समुदायको सहयोगमा सन २०२१ मा हुने बेलायती जनगणनामा नेपालीलाई पहिचान स्पष्ट हुने गरि तथ्याङ्कमा समावेश गर्न प्रधानमंत्री टेरेसा मेलाई एनआरएनए , बेलातले बेलायती प्रधानमन्त्री...
क्याट यूकेको च्यारिटी डिनर सम्पन्न , पैंतीस लाख प्रतिवद्दता
लामो समयदेखि प्रतिक्षारत चितवन एण्ड ट्रष्ट अर्थात क्याट यूकेको च्यारिटी डिनर सयौको संख्यामा उपस्थित चितवन घर भई बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू माझ ह्यारो फुटबल क्लब , ह्यारोमा सम्पन भएको छ ।कुशल ढङ्गबाट व्यवस्थापन गरिएको च्यारिटी डिनरमा क्याट यूके नेपाली रुपैया करिब ३५ लाख उठाउन सफल भएको छ । आपतकालिन अक्षयकोष स्थापनार्थका लागि...
क्याट यूकेको च्यारिटी डिनरमा सहभागी हुन आग्रह
आउँदो आइतबार डिसेम्बर २ मा ह्यारो फुटबल क्लब ह्यारोमा साँझ ५ बजेदेखि हुन लागेको क्याट यूकेको च्यारिटी कार्यक्रममा उपस्थित दर्शकलाई मनोरञ्जन गराउँन चर्चित हास्य तथा ब्यङ्गकार मनोज गजुरेल आउने भएका छन । चितवन निवासी प्रसिद्ध गायिका सरिता गुरुङ्ग कार्यक्रमको थप आर्कषण हुने छिन । गजुरेल र सरिताको कला मिश्रणले कार्यकमलाई अझै...
काबुलमा भएको बम हमलामा नौं नेपाली घाईते
काठमाडौं । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा बुधबार साँझ भएको आतंकवादी हमलामा परी नौं नेपाली घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये तीनजना सामान्य उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको र ६ जनाको उपचार भइरहेको भारतस्थित नेपाली दुताबासले जानकारी दिएको छ । दुताबासका अनुसार एकजनाको अवस्था गम्भीर छ । ‘तीनजनालाई सामान्य उपचारपछि शुक्रबार जिस्चार्ज...
नेपाली हस्तकला सामग्रीको आकर्षक बजार बन्दै बेलायत
नेपाली सिप कलाको इतिहास हजारौ बर्ष पुरानो छ यद्यपी नेपाली हस्तकला र नेपाली मौलिक उत्पादनको अन्तराष्ट्रिय निर्यात सन् १९६० तिरबाट मात्रै शुरुवात भएको हो । हस्तकला र अन्य नेपाली उत्पादनको व्यवस्थित बजार भने सन् १९७० पछि मात्रै भएको हो । छिटपुट , लुकीछिपी यस्ता सामानको उत्पादन गर्ने श्रमिक र कारखानाको एकिन तथ्याङ्क नभए पनि आजसम्म ७० वटा...
स्कटल्याण्डकी युवतीलाई नेपालका छाडा कुकुर देख्दा चिन्ता !
काठमाडौं । नेपाली मुलकी स्कटल्याण्डकी युवती गंगामाया थापा मगरलाई नेपालमा छाडा कुकुर र फोहोर मैला देख्दा विरक्त लागेको सुनाइन । नेपाल घुम्न आएकी उनले छाडा कुकुरको ब्यवस्थापन र सरसफाइको क्षेत्रमा केही नयाँ काम गरेर काम गरेर नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने बचन पनि दिएकी छिन् । काठमाडौंको सितापाइलामा जन्मिएर स्कटल्याण्डमा बसेर सरकारी...